नेपाली सेनाको भरोसा
भदौ २४ देखि नेपाली सेनाले नयाँ प्रधानसेनापति पाएको छ । नेपाली सेनाको ४३औं प्रधानसेनापति भएका पूर्णचन्द्र थापालाई २०१७ भदौ २५ गते लमजुङमा जन्मेका हुन् । २०३६ सालबाट नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका थापामाथि आमनेपालीले पूर्ण विश्वास र भरोसा गरेका छन् । तथापि सरकारको निर्देशन र संविधानमार्फतमात्र चल्ने बानी परेको नेपाली सेनाबाट केही होला त ? भनेर संशय प्रकट गर्नेहरु पनि धेरै छन् । तापनि सेनाको कमाण्ड सम्हाले लगत्तै प्रधानसेनापति थापाले देश बिखण्डन गर्न खोज्ने विरुद्ध सेना कडा रुपमा लाग्ने बताएका हुन् । यति सुन्न पाउनु पनि देशभक्तहरुका लागि खुशीको कुरा हो ।
किनभने मधेश अलग देश भनेर नाराजुलुस निस्कन थालिसकेको छ । पूर्ववर्ती सेनापतिहरु रुकमांगद कटवालदेखि छत्रमात्र सिंह गुरुङ, गौरव शमशेर हुँदै राजेन्द्र क्षेत्रीसम्मले यस्तै आशलाग्दो भनाई राख्दै आएका थिए । तर, देश बिखण्डनको आगो भित्रभित्रै सल्किएको रहेछ, जुन असोज ३ गते मधेशमा आगलागीका रुपमा देखिएको छ । सीके राउतजस्ता बिखण्डनका बीउहरुले जनकपुरबाट खुलेआम आमसभा गरेर संविधानमा आगो लगाए, सरकारको आलोचना गरे, मधेश देश अलग हो भनेर घोषणा नै गरिदिए । त्यस्ता अराष्ट्रिय तत्वलाई न त प्रदेश, न ओली सरकार र न सुरक्षा निकायले नै पक्राउ गर्न सक्यो । यसको अर्थ भाषणले अव देश बच्दैन । बचाउन सकिन्न ।
यतिमात्र होइन, २ नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री नै कालो संविधान दिवस मनाउन निस्किए । यो संविधान अनुशासनसम्म कायम गराउन नसक्ने भएछ । राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त संविधान संशोधन नभए मधेश टुक्य्राइन्छ सम्म भने । सीके राउत, गोइतसँग अलि अघि वार्ता गरेको समाचार थियो, बिखण्डनवादीसँग केको वार्ता ? यसमा नेपाली सेनाले के सोचिरहेको छ, प्रधानसेनापतिलाई नै थाहा होला ।
सेनाले अव सोच्नुपर्छ । सेनाले निर्देश गर्नै नसक्ने नेपाल सरकारको निर्देश कुरेर बस्ने होइन । दिनहुँ सीमा मिचिने, सीममा नेपाली लुटिने, घरमा सुतेको नेपालीलाई सीमापारबाट आएर गोली ठोकेर जाने भारतीय हस्तक्षेप अव ज्यादा भयो । भारतले ६ सय बर्ग बिलोमिटरभन्दा बढी नेपाली भूभाग मिचिसक्यो । दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका ७१ ठाउँमा सीमा मिचिएका छन् । सरकार बोल्दैन भने सेनाले पनि नबोल्ने त ? आदेश छैन भनेर नेपाली सेनाले आँखामा पट्टी बाँधेर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
प्रधानमन्त्रीमात्र होइन, प्रदेश सरकारको समेत बिरोध गर्न नपाइने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? मधेश अलग देश हो, नेपाल होइन भन्न पाइने यो कस्तो शासन व्यवस्था हो ? तात्पर्य बेथिति बढ्यो । राष्ट्रिय अखण्डताको गाईजात्रा हुनथाल्यो । शासन व्यवस्थालाई सर्वोपरि तर मुलुकको अखण्डताको कुरालाई नजरअन्दाज भइरहेको छ । अव त सेनाभित्रको भ्रष्टाचार संसदमा समेत उठ्न थालेको छ । एकातिर सेनाको मनोवल गिराउने, अर्कोतिर विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै जाने परिदृश्यहरु सेनालाई कतिसम्म पाच्य हुनसक्छ होला ? सेनालाई राजनीतिक भुत्ते खुकुरी बनाउने साजिसबाट सेना बच्नुपर्छ, सेना देशको नमक खाएको सेना हो, देशका लागि केही गर्छ भनेर सन्देश दिनैपर्छ । सेना गलत काममा सहभागी छैन, सेनाको दृष्टिमात्र देशको सुरक्षामा छ भनेर पनि देखाउने बेला भयो । विश्वशान्तिमा समेत संवाहक बनेको सेना, आफ्नै देशको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्षम छ भनेर जनतामा विश्वास हुनैपर्छ ।
संसारमा आफ्नो सेनाको मनोबल गिर्ने क्रियाकलाप गर्ने छुट हुन्न । देशविरुद्ध बोल्नेमाथि सेना जाइलाग्छ, यसमा पनि कसैले प्रश्न गर्दैनन् । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले यी सब कुरा र आफ्नो परमदायित्व बुझेर नेपाली जनताको विश्वास अझ बढाउन सक्नुपर्छ । जर्नेल, कर्नेलका श्रीमतीहरुलाई रानीसाब नभनी म्याडम भन्न सिकाउने प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले निभाउनु पर्ने दायित्व धेरै छन् । आलोचना त भारतीय र चिनियाँ राजदूतको भेटवार्ताबाट सुरु भएको छ, आगामी दिनमा फुकी फुकी पाइला चाल्ने र देशविरोधीमाथि जाइलाग्न पूर्णचन्द्र थापालाई सबै नेपालीको साथ र समर्थन चाहिएको छ । दिन सबै नेपाली तैयार छन् । मात्र प्रधानसेनापतिको कुर्सीमा बसेका थापाले ढाडमा हाड बलियो पार्न जरुरी छ । सम्मान आर्जन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ, आमजनजनको विश्वास पनि छ, यो जनविश्वाससहित देशभक्तिको सफलताका लागि शुभकामना ।